जगदीश घिमिरे | मझेरी डट कम
बन्द गर प्रभु ! बन्द गर !
editor — Sun, 05/29/2016 - 16:00
editor — Sat, 01/03/2015 - 17:52
बाह्रौँ बलात्कारी भित्र पस्ता उसले हलचल गर्न छोडिसकेकी थिई । बलात्कारीलाई यो ज्यादै मन परयो, किनभने पहिले पहिलेका बलात्कारीहरूले जस्तो उसले बलात्कृतको लात सहनुपर्ने भएन ।
editor — Sun, 11/09/2014 - 23:10
editor — Tue, 02/11/2014 - 15:12
दुईतिर हजारौं लाखौं वर्षदेखि उभिइरहेका नरमाइला नाङ्गा डाँडाहरू । उत्तरपट्टिडाँडाको कातकतै बगिरहेको तामाकोशी, जसको अस्तित्व अलि तल्तिर सूनकोशीमा सेलाउँछ । यो मन्थली घाट हो
kbs — Sun, 09/04/2011 - 19:53
kbs — Sun, 08/28/2011 - 11:39
उनको ईमान्दारीले देशका ठूलादेखि साना, वरिष्ठदेखि गरिष्ट सबै तहका नेताहरू रिझिएका छन् । उनको कार्य-कुशलता र कार्य-क्षमताले गर्दा उनीभन्दा माथि, मुनि, बराबरी-सबै स्तरका जागिरदारहरू, सहकर्मीहरू, सहधर्मीहरू प्रसन्न छन् । उनीसँग काम पर्ने सबै जनता उनको गुण मान्दछन्, प्रशंसा गर्दछन्, भन्दछन् - हाकिम हुन यस्तो पो हुनु । बिझाएको कसैलाई छैन । पिर मर्का पारको कसैलाई छैन । सबैलाई रिझाउन सक्ने, जे जस्तो अप्ठयारो काम आइपरे पनि मेलो मिलाएर गर्न जान्ने ।
kbs — Wed, 02/09/2011 - 15:55
मेरो र मधुपर्कको साहित्य यात्रा उही दशक सुरू भयो । म अलि जेठो हुन पुगेँ । किनभने मधुपर्क जन्मिनुभन्दा केही वर्ष अघिदेखि मेरा रचनाहरू गोरखापत्र तथा रचना र रूपरेखाजस्ता त्यसबेलामा प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिकाहरू छापिन लागेका थिए ।
kbs — Sat, 04/18/2009 - 16:48
२०२० को दशकमा चर्चाको शिखर टेकेकी 'शून्यवादी पारिजात 'राल्फा' र 'कम्युनिस्ट' भएपछि पनि आफ्ना दर्जनौं कृति र जीवनशैलीमार्फत समेत चर्चित छन् ।
पारिजातसँग मेरो दोहोरी थिएन । मेरो २०२७ सालमा छापिएको 'लिलाम' उपन्यास पढेपछि उनले मलाई पहिलो पत्र लेखिन् । प्रतिष्ठित लेखिकाको प्रशंसात्मक पत्र पाएर मलाई सुखद आश्चर्य भयो । डेढ वर्षको त्यस दोहोरीमा मसँग एउटाको उतारसमेत उनका सात थान पत्र छन् । अरू केही थिए, हराए ।
kbs — Fri, 02/06/2009 - 17:48
kbs — Thu, 11/20/2008 - 19:57
आफ्नो ६३ वर्षो जीवनमा मूलतः म मेरो मातृभाषाभाषीबीच बाँचेँ, बोलेँ, सुनेँ, सिकेँ, लेखेँ । मैले ४५ वर्षघि थालेको साहित्य सिर्जनाको मूल माध्यम पनि नेपाली नै हो । दुई वर्षेखि म पिँजडाको सुगाजस्तो कोठा, अध्ययन र लेखन-केन्द्रित भएपछि वार्तालापमा मात्र होइन, किताब, छापा, टीभी र एफएमहरूमा नेपाली भाषामा प्रचलित सामयिक शब्द, भाव, शैली र उच्चारणहरूको गतिशीलतासँग पुनः परचिय गर्दैछु ।
kbs — Sat, 11/08/2008 - 17:01
kbs — Wed, 10/08/2008 - 18:08
चारतिर बाँडिएको यौटा मुटु माया माग्छौ तिमी